नाकमा चिल्लो वा खिल आउन नदिन के गर्ने ? डाक्टर यसो भन्छन्...(भिडियो सहित) | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
नाकमा चिल्लो वा खिल आउन नदिन के गर्ने ? डाक्टर यसो भन्छन्...(भिडियो सहित) Home
नाकमा चिल्लो वा खिल आउन नदिन के गर्ने ? डाक्टर यसो भन्छन्...(भिडियो सहित)
Jan 09, 2017 15:01
6.6K0comments
हाम्रो समाजमा नाकमा आउने चिल्लो वा खिल बारे धेरै भ्रम छ । सानोमा बढी चिल्लो खायो वा लायो भने यस्तो हुन्छ, यसलाई निचोरेरै हटाउन सकिन्छ, भन्ने भ्रम मात्र हो । यस कारण नाक वरिपरी छालामा चिल्लो वा खिल आउँछ: